बेला–कुबेला किन हुन्छ यौन उत्तेजना ? यस्तो रहेछ कारण – aajnepal
HomeRochakबेला–कुबेला किन हुन्छ यौन उत्तेजना ? यस्तो रहेछ कारण
डा. राजेन्द्र भद्रा । तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिनु पहिले हाम्रो यौन व्यग्रता अनि लिङ्ग कसरी उत्तेजित हुन्छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
यो पनि पढ्नुहोस् : फेसियल गर्दा एस्तो गल्ति नगर्नुहोस्, नत्र अनुहार नै बिग्रन सक्छ !
बेला–कुबेला किन उत्तेजना ?
त्यसबाहेक पनि यौवनावस्थामा अनायास स्वत: लिङ्ग उत्तेजित हुन्छ । आफूले यौनसम्बन्धी कुरा चेतन रूपमा नसोचेको बेला पनि यस्तो हुन सक्छ । यौन उत्तेजना नै नभएको स्थिति जस्तो कि खाना खाँदा खाँदै, हजुरआमासँग कुरा गर्दागर्दै, कक्षामा अध्ययन गर्दागर्दै वा निदाएको बेलासमेत बेला–कुवेला लिङ्ग उत्तेजित हुन सक्छ । वास्तवमा यस्तो स्थिति लाजमर्दो हुन्छ र त्यतिबेला निकै असजिलो अनभुव हुन्छ । यस्तो स्थितिलाई कउयलतबलभयगक भचभअतष्यल भनिन्छ । यसलाई नेपालीमा स्व:स्फूर्त लिङ्ग उत्तेजन भन्न सकिन्छ । किशोरावस्थामा विशेष गरेर हार्मोन उत्पादन हुने क्रम अधिक मात्रा नि:सृत हुँदा त्यसको प्रभावका कारणले हुने विश्वास गरिन्छ । यो पनि एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यस्तो उत्तेजना केही बेरमै आफैं कम भएर जान्छ । उमेर बढ्दै गएपछि स्व:स्फूर्त लिङ्ग उत्तेजन हुने क्रम पनि कम हुँदै जान्छ ।
यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले उपचारका लागि केही गर्नु आवश्यक छैन । उमेर बढ्दै गएपछि यो कम हुने मात्र होइन, यौन क्रियाकलापमा तपाईंको नियन्त्रण पनि बढ्छ । लिङ्ग उत्तेजना कुनै पनि पुरुषको यौन जीवनको अभिन्न अङ्ग हो । बेला–कुुवेला हुने यस्तो स्व:स्फूर्त लिङ्ग उत्तेजनालाई ठयाक्कै बन्द गर्ने नसकिए पनि सार्वजनिक स्थलमा अप्ठयारोमा पर्ने कुरालाई केही कम गर्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
यौन उत्तेजना नहोस् भनेर यौनसम्बन्धी नभै अन्य जस्तै— गृहकार्य, खेलकुद अनि परीक्षाका बारेमा मात्र सोच्दा केही फाइदा हुन्छ।
तपाईंले कस्तो किसिमको भित्री लुगा अर्थात् अन्डरवेयर लगाउँदै आउनुभएको छ थाहा भएन । खुकुलो किसिमको भित्री पहिरनको सट्टा टपक्क मिलेको भित्री पहिरन लगाए केही गरी लिङ्ग उत्तेजित भैहाले पनि अरूले सजिलै थाहा पाउने स्थिति हुँदैन।
केही गरेर सार्वजनिक स्थलमा लिङ्ग उत्तेजित भैहालेको स्थितिमा पहिलो कुरा त यथास्थितिमा शान्तसँग लिङ्ग शिथिल नभएसम्म बसिरहने, तर यता उता हिँड्नु छ भने लगाएको सर्ट वा टिसर्ट पाइन्टभित्र नकसी बाहिर निकाल्ने जसले केही हदसम्म भए पनि लिङ्ग उत्तेजनालाई छोप्न मद्दत गर्छ । आफूसँग भएको पुस्तक, फाइल वा झोला अघिल्तिर ल्याएर पनि यो कार्य गर्न सकिन्छ।